मलेसियामा पनि भेटियो ओमिक्रोंन ! नेपालीहरुलाई सुरक्षित हुन् आग्रह - ramechhapkhabar.com
मलेसियामा पनि भेटियो ओमिक्रोंन ! नेपालीहरुलाई सुरक्षित हुन् आग्रह
कोरो’नाको नया भेरिएन्ट अन्तत मलेसियामा पनि भेटिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्री खाइरी जमालुद्दीनले पत्रकार सम्मेलन गरेर दिइएको जानकारी अनुसार नोभेम्बर ११ देखि नोभेम्बर २८ सम्म सेपाङको क्वालालम्पुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ७४ जनामा गरिएको परीक्षण मा नया भेरी एन्ट को बिरामी पुष्टि भएको हो ।
नया ओमिक्रोंन भेरिएन्ट भेटिएको नागरिक दक्षिण अफ्रिका का हुन् र उनि दक्षिण अफ्रिकाबाट सिंगापुर हुदै नोभेम्बर 19 मा मलेसिया आइपुगेको थियो । उनि १९ बर्षका छन् । “उनी इपोह, पेराकको एक निजी विश्वविद्यालयका विद्यार्थी हुन्,” मन्त्रीले भने ।
अफ्रिका बाट सुरु भएको कोरोनाको नया भेरिएन्ट बिस्वब्यापी रुपमा तिब्र फैलीइरहेको छ . खाडीका रास्ट्र साउदी र युएई मा पनि भेटिइसकेको छ र अफ्रिकी मुलुक लगयाताको देशका नागरिक लाइ यात्रा प्रति’बन्ध लाइसकेको छ ।
क्वालालम्पुर: मलेसियामा फेरी एक नेपाली को मृत्यु भएको छ । सौचालय गएका सुनसरी का सन्तोस ठाकुरको सौचालायमै हृदय घात भएर मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ । उनको शब् स्थानीय अस्पतालमा पोस्टमार्टम को लागि राखिएको सोही कम्पनीमा कार्यरत नेपाली सुपरभाइजर शिव खड्काले जानकारी दिए ।
सुनसरीका सन्तोस मोन्टेज ओभरसिस प्राइभेट लिमिटेडबाट तासिन हार्डवेयर एसडिएन बिएचडी नामक कम्पनीमा पाच वर्ष देखि कार्यरत थिए । मलेसियाको पेनाङ्ग राज्यको पेराई पुलाउ पिनाङ्गमा मा कार्यरत,
सन्तोस मंगलबार साझा सौचालय गएको लामो समय सम्मानी नफर्केपछि सौचालय भित्रै दिशा गरेको अबस्थामा नै मृत्यु भएको पाइएको थियो । पोस्टमार्टमका लागि राखिएको सन्तोस को शब् पोस्टमार्टम भैसकेपछि नेपाल पठाउने प्रक्रिया सुरु हुने जनाइएको छ ।